Wholesale Portable Inflatable Stand Up Paddle Board ho an'ny olon-dehibe SUP miaraka amin'ny kitapo fitahirizana Fanamboarana sy Factory |XGEAR
Portable Inflatable Stand Up Paddle Board ho an'ny olon-dehibe SUP miaraka amin'ny kitapo fitahirizana
XGEAR 10'6 ″ Inflatable Stand Up Paddle Board miaraka amin'ny 3 Fins, ny fanamboarana ultralight vaovao misy sosona roa 6” PVC hatevin'ny izay miorina kokoa noho ny mahazatra 4” & 5” mitsangana board paddle.Ny endrika manokana sy ny famehezana tsy mitongilana ho an'ny paddleboards mitsangana dia miantoka ny faharetana tsara.Ny sakany fanampiny amin'ny 32″ dia ho an'ny fifandanjana tsara kokoa.
XGEAR portable ISUP miaraka amin'ny kitapo fitahirizana dia tsara ho an'ny haavon'ny fahaiza-manao rehetra ary tonga lafatra amin'ny ankamaroan'ny tontolo rano.
● XGEAR inflatable sup dia 10' 6'' ny halavany, ary nohatsarainay ny fahamarinan-toerana sy ny fifandanjana amin'ny 32'' ny sakan'ny deck.Ny lanjany dia 19.8Ibs ary ny lanjany tohana dia mahatratra 300Ibs.
● XGEAR maivana inflatable mitsangana paddle board dia vita amin'ny fanerena avo roa heny manda stitch fitaovana (Max 1 bar na 14.5Psi) izay ny ambony indrindra ara-miaramila kilasy fitaovana.Ny borosy matevina mitsangana mitsangana board miaraka amin'ny Non-Slip EVA foam, dia tsara ho an'ny haavon'ny fahaiza-manao rehetra sy ny halehiben'ny avo indrindra hisorohana ny latsaka ao anaty rano.
● Ny paompy misy mari-pamantarana.Ny board paddle sup misy vombony 3 dia manome ny fahamarinan-toerana tsara indrindra sy ny fahaiza-maneuverability, tsy mila fitaovana hametrahana vombony.
● Ny vata fampangatsiahana misy peratra D ho an'ny tady azo antoka, tady elastika na seza Kayak.Misy ihany koa ny fampiononana black diamond groove traction pad.
Fitaovana fototra Ny ultra-fanorenana maivana miaraka amin'ny PVC roa sosona6'' hateviny
Soso-kevitra miasa psi 15 psi
Mahazaka lanja max 300lbs
Item refy L126 x W32 x H6santimetatra
Haben'ny boaty anatiny (habe miforitra) L33.9 x W15.75 x H9.85 santimetatra
Lanja entana 13.5KG
Haben'ny baoritra L34x W16 x H12 santimetatra (1 pcs/box)
CartonGross Weight 14KG
Fanamarihana: Satria ny vokatra dia havaozina tsy tapaka, mifandraisa aminay ho an'ny famaritana farany.
Tmisy loko izy ho an'ny fomba efatra:
XGEAR ISUP miaraka amin'ny kojakoja paddleboard feno, ireto fitaovana ilaina amin'ny fivoy ireto manaraka ireto:
2. Fivoy aluminium Adjustable;
3. Manual paompy rivotra;
4. Kitapo fitehirizana - kitapom-batsy ambony;
5. Fin / skeg ho an'ny fanaraha-maso;
6. Kitapo fanamboarana;
7. Tady fivoy fiarovana/ Kayak.
Ahoana ny fametrahana ny fanorenana:
1. Esory ny solaitrabe miforitra ary apetraho eo amin'ny tany fisaka ary avelany.
2. Ampio ny vombony lehibe avy eo.
3. Ataovy azo antoka fa eo amin'ny toerana mety ny ivon'ny valva - "miakatra sy manakaiky".
4. Ampifandraiso fotsiny ny valva sy ny paompy, ary atsofoka mandra-pahatongan'ny tsindry ambony.
Ahoana ny fomba deflate sy ny fonosana:
1. Ento amin'ny toerana fisaka izany ary tadidio fa madio sy maina ny solaitrabe.
2. Tsindrio ary atodiho 1/4 mivily manaraka ny fihodin'ny famantaranandro ny ivon'ny valva mba hamoahana ny rivotra
3. Esory ny vombony lehibe
4. Atsofohy eo amin'ny orona ny solaitrabe ary tohizo ny rivotra rehefa mihodina
5. Tehirizo ao anaty kitapo ny solaitrabe voahorona.
Ity board paddle mitsangana ity dia azo entina hotehirizina sy entina, azo aforitra mba ho mora ny fandehanana, atsipazo ary atao anaty kitapo.Rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao ianao, dia azonao atao ny manaparitaka haingana ny solaitrao amin'ny paompy ary miditra ao anaty rano avy hatrany.
Mety amin'ny ankamaroan'ny tontolo misy rano.Toy ny seashore surfing, snorkeling, rao anaty farihy, torimaso, yoga, jono, fitetezam-paritra sy ny sisa.Ny famolavolana manokana XGEAR miaraka amin'ny gripa tsy mitongilana dia miantoka ny fiarovana sy ny faharetana, noho izany dia tonga lafatra amin'ny haavon'ny fahaiza-manao sy ny fepetra rehetra.
teo aloha: XGEAR Pop Up mora mametraka 6 lafiny Hub Screen House / Canopy
Manaraka: Varotra mafana ho an'ny tady ady amin'ny fomba vaovao ho an'ny fampiofanana matanjaka sy fototra
Seza sambo miforitra ambany lamosina ho an'ny jono
Seza deck azo entina miforitra miaraka amin'ny Frame Aluminum...
Seza sambo fanjonoana lamosina iva miaraka amin'ny fiasa miforitra